कोरोनाको खोप अव एक महिनामै आउने, सर्वसाधारणले कहिले पाउँछन् ? - समय-समाचार
कोरोनाको खोप अव एक महिनामै आउने, सर्वसाधारणले कहिले पाउँछन् ?
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार ०६:२३
एजेन्सी, कात्तिक २४ । आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा कोरोना भाइरस खोप तयार भइसक्ने एस्ट्राजेनेका फार्मासियुटिकल्सका सिइओले बताएका छन् ।
कम्पनीका सिइओ पास्कल सोरियटका अनुसार नियमन गर्ने निकायहरूबाट अनुमति पाएपछि खोप सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने गरी उपलब्ध हुनेछ ।
नियमनकारी निकायहरू निरन्तर हाम्रा तथ्यांकहरू निगरानी गरिरहेका छन् । पास्कल सोरियटका अनुसार खोपका सबै काम सकिसक्दासम्म उनीहरूले पनि आफ्नो काम सके भने जनवरीदेखि यो खोप उपलब्ध हुने बताए । अझ डिसेम्बर अन्तिमदेखि नै सर्वसाधारणले खोप लाउन सक्ने उनको भनाई छ । एस्ट्राजेनेकाका सिइओ पास्कलका भनाइ उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले यो खबर लेखेको छ ।
उक्त खोप एंलो—स्वीडिस कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले बेलायतमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी बनाईरहेको छ । एस्ट्राजेनेकाको खोपमा संसारका धेरैको चासो छ । परीक्षणको तेस्रो चरणमा पुगिसकेको भएकाले यो खोपले कोरोना भाइरस महामारीसँग लड्न सघाउने धेरैको आशा छ ।
साउद चाइना मर्निङ पोस्टका समाचार अनुसार एस्ट्राजेनेकाको खोप गत सेप्टेम्बरमै तेस्रो चरणको परीक्षणमा प्रवेश गरेको थियो। तर परीक्षणमा सहभागीमध्ये केही व्यक्तिमा असर देखिएकाले परीक्षण रोकिएको थियो।
एस्ट्राजेनेकाको खोपका लागि युरोपियन युनियन, अमेरिका, बेलायत, जापान र ब्राजिलले पहिल्यै सम्झौता गरिसकेका छन्। यो खोपको चीनमा पनि परीक्षण भईरहेको छ । त्यहाँ पनि यसका दुइटा परीक्षणमा सफल नतिजा आएको छ भने तेस्रो पनि प्रभावकारी देखिएको एस्ट्राजेनेका चीनका अपरेसन हेड लियोन जाङको भनाई छ ।
यो बाहेक चीनले आफैं बनाउँदै गरेको खोप पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमा छ। यो खोप सिनोभाक, वुहान इन्स्टिच्युट अफ बायो प्रोडक्सनर सिनोफार्म, केनसिनो बायोलोजिकल र बेजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोटेक्नोलोजीले बनाइरहेका छन्।त्यस्तै रुसमा तयार भइरहेको स्पुतनिक–भी खोपमा पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भएको एक रिपोर्टले जनाएको छ।